FANDAHARAM-POTOANA HANOVàNA NY ENDRIKY NY MOZIKA - MIFIDY PROGRAMA IRAY - 2019
Tena Mifidy programa iray
Fandaharam-potoana hanovàna ny endriky ny mozika
Ny fanovozam-baovaovan'ny mozika - fampodiana (famerenana) mozika iray.
Ny tanjona amin'ny fanovàna ny endriky ny mozika dia samy hafa: amin'ny fampihenana ny haben'ny rakitra ho fampifanarahana ny format amin'ny fitaovana samirery samihafa.
Ny fandaharan'asa amin'ny fanovana ny endriky ny mozika dia antsoina hoe converters, ary ankoatra ny mivadika mivantana, dia afaka manao asa hafa, ohatra, maka CD discs.
Diniho ireto fandaharana vitsivitsy ireto.
DVDVideoSoft Free Studio - programa lehibe. Ankoatra ny rindrankajy ho an'ny fampivoarana mozika, dia ahitana programa fampidinana, famoahana ary famoahana rakitra multimedia.
Fitaovana Audio Converter
Iray amin'ireo mpanamboatra mora indrindra. Ny dingana manontolo dia atao amin'ny fanindriana bokotra roa. Ny fandaharana dia maimaim-poana malalaka, miaraka amin'ny vola madinika indrindra.
Azonao atao ny mampifangaro ny rakitra rehetra ao anatin'ilay rakikira ho lasa làlana iray lehibe.
Mpivarotra hafa tsotra indrindra. Mampiofana karazana format malalaka, mizara maimaim-poana.
Convertilla dia manana ny asany amin'ny fampivoarana rakitra ho an'ny fitaovana iray manokana, izay ahafahanao manova ny endriky ny mozika tsy miditra amin'ny sehatra.
Ny Factory Format ankoatra ny feo dia miasa miaraka amin'ny rakitra video. Izy io dia manana andraikitra amin'ny fampifanarahana ny multimédia ho an'ny fitaovana finday, ary afaka mamorona GIF animations avy amin'ny sarimihetsika sarimihetsika.
Ity programa handikana mozika ity dia tsotra, nefa miaraka amin'ny mpandika ny foibe. Ny endri-javatra miavaka dia ny hamaroan'ny fiovaovana fiovaovana.
Fampiroboroboana mahery vaika hiasa amin'ny audio sy video. Extract sound from mp4 files, convert CDs to digital formats.
Ny roambinifolo Total Audio Converter, izay manana fonosana bebe kokoa.
EZ CD Audio Converter dia mivoaka avy ao amin'ny Internet ary manova ny metadata hira, manova ny zavakanto volomborona sy ny rakitra tsirairay, mametraka ny habetsaky ny lalamby. Ankoatra izany, izy dia manohana endrika maromaro kokoa ary manana safidy mavesatra kokoa.
Lesona: Ahoana no hanovana ny endriky ny mozika ao amin'ny programa EZ CD Audio Converter
Ny safidin'ny programa fanovana ny format music dia tena lehibe. Androany dia tsy nahita afa-tsy ampahany kely tamin'izy ireo izahay. Anisan'izy ireo ny fitaovana tsotra miaraka amin'ny bokotra roa ary farafahakeliny ny sehatra; misy ihany koa ireo fitaovana maro samihafa izay ahafahanao miara-miasa amin'ny lahatsary ary na dia CD fanoratana ihany aza. Ny safidy dia anao.
https://termotools.com mg.termotools.com © Mifidy programa iray 2019